kulan wada tashi ah oo dhexmarey Godoomiyaha G/Bay& Ergada ka qiib galeysa shirka KGsoomaaliya. – idalenews.com
Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Baay Waxaa kulan Wada Tashi ah uu Dhex Maray Maamulka Gobalka Baay iyo Sido kale Ergooyinkii ka qayb galayeey shirka lagu dhisayo Maamulka K/Galbeed soomaliya.
Qaar kamid ah qaban qabiyaasha shirka oo kulanka ka hadlay ugu Horeyn ayaa kawarbixiyeey halka uu marayo shirka dhismaha Maamulka K/galbeed soomaliya odiyaasha dhaqanka iyo ergooyinka iyagoo shegay in qaab wanaagsan uu kusocdo.
Masuuliyintan ayaa shegay in isbuucan Ergooyin kala Duwan ay kusoo bireen Shirka kuwaas oo ka kala yimid 6 gobal ee la doonayo in laga Hir galiyo Maamulka.
ka dib godoomiyaha gobolka Bay cabdi Aadan Hoosow ayaa u sheegey in uu maamulka gobolka iyo degmada baydhabo markasta lagarab taagan yihiin shirka maamul u sameynta KG soomaaliya heel iyo hooba. isla markaan waxa uu intaa ku darey in si weyn loo adkeyn doono amaanka magaalada.
mudane Hoosow ayaa sidoo kale tilmaamey in gacan adag ku baqan doono maamulkiis cid cale ciid carqaladeynayso. waxaa jiraa dadka ka soo jeedo degaanada kG soomaaliya kuwaaso doonaya in la dhiso 3 gobol.
Idale News Online , Baydhabo.
GUDIYO KMG AH OO LOOGU DHAWAAQEY SHIRKII DHISMAHA DOWLADA KG SOOMAALIYA.